Ben Nwabueze: Wepụ IPOB dịka 'otu oyiegwu' - BBC News Ìgbò
Image copyright @Ben Nwabueze Centre
Nkenke aha onyonyo Ben Nwabueze bụ onyeisi ndị Eastern Consultative Assembly
Nwabụeze kwuru na e meghị nke a ndị okenye Igbo ga-ebuzi mbọ a na-agba maka nnwereonwe Biafra n'isi.
Onye ọkaiwu ahụ kwuru nke a oge ndị otu IPOB gara n'ụlọ ya n'Atanị Anambra Steeti ịga rịọ ya mgbaghara maka ikposa nzukọ nke otu ndị okenye si ọwụwa anyanwu nke a kpọrọ, Eastern Consultative Assembly, na bekee, nke Nwabụeze bụ onyeisi ya, mere n' Enugu n'ọnwa Februwarị afọ a.
O kwuru na ya a gaghị esonye na mkparịtaụka ọbụla gọọmentị etiti na-akwado ma ọ bụrụ na ha ebughị ụzọ maha mmachi a machiri IPOB ma wepụ aha ha dịka otu 'oyiegwu'.
Ọ sị:" Ọ bụrụ na elebanyeghị anya na mkpagbu gọọmenti etiti na-akpagbu, ọ ga eru oge ọ ga bụ Igbo niile ga-esonye ha, ndị okenye dịka mụ ga-eburu ya n'isi. Nke a ga-abụrụ nsogbu kachacsi njọọ nye ala Naijiria."
Nkenke aha onyonyo Gọọmentị Etiti gụrụ IPOB nd
O kwuru na mkpagbu a na-akpagbu Ndigbo na Naijiria butere mkpu akwa ndị IPOB.
Ọ gakwara n'ihu kwu na mkpagbu ahụ bidoro na afọ 1965 oge konsul na achị na mahadum nke lagos, University of Lagos,' ebe ọtụtụ bụ ndị Yourba kpara nkịta iwepụ onyeisi mahadụm ahụ bụ onye Igbo a kpọrọ ọkammụta Enyi Njoku.
"Aka m na-echeta akụkọ ihe mere na University of Lagos n'ụbọchị ọnwa Maachị, afọ 1965 oge m bụ onye nkuzi na mahadum ahụ e mepere ọhụrụ. Ha chọrọ iwepụ ọkammụta Enyi Njoku dịka onyeisi mahadum mana a jụrụ ajụ. I kpọkọtara m ụmụakwụkwọ na ndị nkuzi anyị mee ngagharịiwe mere ka emechie mahadum.
"Anyị lụsoro gọọmentị etiti nke Alhaji Tafawa Balewa ọgụ. A nwuchiri m ma ma m ọkaikpe onye Yoruba mara m ikpe mkpọrọ ọnwa isii maka idu na ngaghariiwe ahụ mana anyị gbagharịrị akwụkwọ ma otu onye ọkaikpe ,onye mba Sierra-Leonia bụ J.S Taylor kagburu ọmụma ikpe ahụ ma tọrapụ m, nm nwere ọnwe m.
Ụbọchị nke a mere, Ndịgbọ niile nọ na Legos nwere oke ọnụ."
Nkenke aha onyonyo Otu IPOB na- agba mbọ maka nnwereonwe Biafra
Ọ katoro gọọmentị etiti maka imachie IPOB ma hapụ Fulani na-achi ehi, ndị o kwuru na ha na-egbula ọtụtụ ndị Naijiria, ma ọ gụghị ha "ndị oyiegwu".
" A ghaghị m esonye na mkparịtaụka udo ọbụla sọsọ ma amahara IPOB, ndị , dịka o siri kwuo, egbula ọtụtụ ndị Naijiria, ma ọ gụghị ha dịka "ndị oyiegwu".
" A ghaghị m esonye na mkparịtaụka udo ọbụla sọsọ ma a tọpụrụ mmachi a machiri IPOB, ma e wepụrụ aha IPOB dịka otu oyiegwu. ọ bụrụ na gọọmenti etiti aka obi mezuo ọnọdụ abụọ, anyị akpa udo. ọ bụrụ na-ọbụghị otu a, gụpụ m."
Ụka nne ndị Katọlik akpọtụrụ akpọtụ
Ndị nne bụ dịmkpa asaa-Chioma Akpotha
Ụzo atọ nwaanyị kwesiri idozi ya
Ọ bụ ihe ọjọọ ịlụ nwa gọvanọ? - Uche Nwosu
Ihe mere m ji gụọ egwu Chizoba - Paul Okoye
Ndị ntọ atọọla ụmụ akwụkwọ ọzọ na Kamerun